Filibiin waa wadan jasiirado ah oo ku yaalo bariga Aasiya.Wadankaan waxaa markiisa hore soo gumeestay wadanka spania waxoona xornimada ka helay 1898ii kadibneh wadanka Mareykanka, waxoona xornimadiisa ka helay 1946ii.Wadankaan waxaa degan dad gaaraayo ilaa 91,983,000 oo qof. Caasimada wadanka waa Manila. Filipino: Pilipinas [ˌpɪlɪpinɐs] ama Filipinas [ˌfɪlɪpinɐs]), si rasmi ah Jamhuuriyadda Filibiin (Filipino: Republika ng Pilipinas), waa dal madaxbanaan iyo dalal jamac ah ee Koonfur Bari Asia. Waxaa ku yaala Galbeedka Badweynta Baasifigga, waxay ka kooban tahay qiyaastii 7,641 jasiiradaha kuwaas oo lagu sifeeyay saddex qaybood oo waaweyn oo kala ah waqooyi ilaa koonfur: Luzon, Visayas, iyo Mindanao. Magaalada caasimadda ah ee Filibiin waa Manila oo magaalada ugu badani waa Quezon City, labadaba qaybta Metro Manila. Waddamada Galbeedka Shiinaha ee ku yaala Galbeedka, Badda Filibiin oo ku yaala Bariga iyo Badda Galbeedka ee Koonfur Galbeed, Filibiin waxay wadaagaan xudduudaha badda woqooyiga, Vietnam ee galbeedka, Palau iyo bariga iyo Malaysia iyo Indonesia Koonfur. Goobta Filibiin ee ku taala Pacific Island of Fire oo ku dhow Dhul-gariirka ayaa u dhiganta Filibiin inay u egtahay dhulgariir iyo noocyo kale, laakiin waxay sidoo kale ku darsataa khayraadka dabiiciga ah iyo qaar ka mid ah kala duwanaanta noolaha noolaha ee adduunka. Filibiin waxay leedahay aag ah 343,448 kilomitir oo isku wareeg ah (132,606 sq mi) iyo, illaa 2015, dadku waxay ahaayeen ugu yaraan 100 milyan. Laga soo bilaabo Jannaayo 2018, waxay ahayd dalka 8aad ee ugu badan Asia ee ku yaala Asia iyo dalka 12aad ee ugu badan dunida. Qiyaastii 10 milyan Filibiin dheeri ah ayaa ku noolaa dibadda, oo ka kooban mid ka mid ah qurba-joogta ugu wayn dunida. Jinsiyada iyo dhaqamada kala duwan ayaa laga helaa jasiiradaha oo dhan. Waqtiyadii hore, Negritos waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii ugu da 'yaraa ee degaanka ah. Waxay raaceen mowjado isdaba jooga ah dadka Australiyaanka ah. Is-beddelka la leh Shiinaha, Malay, Hindida, iyo Islaamka ayaa dhacay. Kadibna, dowladaha kala duwan ee tartanka badda waxaa lagu aasaasay xukunka Datus, Rajahs, Sultans ama Lakans.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Filibiin&oldid=219791"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:38.